कोरोनाबारे तीन अफवाह, तपाई पनि झुक्किनुभयो कि ? - Mitho Khabar
April 3, 2020 mithokhabarLeaveaComment on कोरोनाबारे तीन अफवाह, तपाई पनि झुक्किनुभयो कि ?
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) लाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा झूठा प्रचारहरु हुन थालेका छन् । यसक्रममा झूठो प्रचार गर्ने एक जनालाई शनिबार प्रहरीले समातेको छ ।
नेपालमा संक्रमण भित्रिन नदिन सरकारले शुक्रबार अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानसँगै लामो दुरीको यात्रा र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण मानिसहरुको आवत-जावतबाट फैलिने भएकाले सरकारले नेपालमा नभित्रियोस् भनेर यो घोषणा गरेको हो ।
तर, समाजिक सञ्जालहरुमा भने कोरोना संक्रमणबारे थुप्रै अफवाहहरु फैलिएका छन् । र, यस्ता अफवाहहरू म्यासेन्जर, भाइबर र हृवाट्सएपका ग्रुपबाट भाइरल बनेका छन् ।
माथि भनिएका कुनै पनि दाबी सत्य होइनन् ।
संक्रमण देखिएको भनेर अफवाह फैलाइएपछि शनिबार दिउँसो नर्भिक अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेसम्म कुनै पनि बिरामीमा संक्रमण नदेखिएको प्रष्ट पारेको छ ।
साथै, कोरोना संक्रमण भए नभएको जाँच गर्ने एउटा मात्र निकाय हो, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु । यो बाहेक अरु कुनै पनि ल्याब वा अस्पताललाई कोरोना संक्रमण भए/नभएको जाँच गर्ने अनुमति नै पाएका छैनन् ।झुटो प्रचार गरेको अभियोगमा रामेछाप घर भई भक्तपुरको सिपाडोल बस्ने २० वर्षका विवेक थापा मगरलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले शनिबार दिउँसो पक्राउ गरेको छ ।
मध्यरातमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले औषधि छर्किँदैछ भन्ने प्रचार पनि अफवाह नै हो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी विज्ञानराज पाण्डेले यसको खण्डन गरेका छन् । सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै झुटो प्रचारमा विश्वास नगर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
साथै कोरोना भाइरसको अहिलेसम्म कुनै औषधि पत्ता लागेको पनि छैन ।यस्तै टेकु अस्पतालमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएको दाबी पनि अफवाह भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार यसरी अफवाह फैलाउने व्यक्ति हाल अमेरिकाको टेक्कसमा भएको पाइएको छ । र उनको त्यो पोष्ट हटाउन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको मुख्यालयमा पत्राचारसमेत भइसकेको छ ।
यस्ता छन् रक्षा श्रेष्ठका असली श्रीमान्, सानैमा भयो विवाह, रक्षाले खोलीन् सबै कुरा…(भिडियो सहित) हेर्नुहोस्
धनगढीका कोभिड-१९ संक्रमितको बयान- ‘संक्रमित भएको थाहा पाएपछि कुनै स्वास्थ्यकर्मी हेर्न आएका छैनन्’
Email:- mithokha[email protected]